ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးသမ္မတကြီး ဟိုဆေး မူဇီကာ (José Mujica)
5 Jun 2018 . 4:51 PM
ဥရုဂွေးဆိုတဲ့ နိုင်ငံလေး။ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲတွေမှာ ဥရုဂွေးလက်ရွေးစင်အသင်းကို ကြားရတတ်တယ်။ တောင်အမေရိကတိုက်က နိုင်ငံလေး သိပ်တော့စိတ်ဝင်းစားစရာ မဟုတ်။ စိတ်ဝင်းစားစရာ ကောင်းတာက ဥရုဂွေးနိုင်ငံကို ပဲ့ကိုင်သွားတဲ့ သမ္မတဟောင်းကြီး ဟိုဆေး မူဇီကာ (José Mujica)။ ရိုးသားလွန်းတဲ့ သမ္မတကြီး။ ကမ္ဘာကျော်သတင်းဌာနဘီဘီစီကတောင် ‘The World’s ‘Poorest’ President’ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးသမ္မတလို့တောင် တင်စားခဲ့တယ်။ မူဇီကာ ဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့ ဆင်းရဲတာလဲ။
ဟိုဆေး မူဇီကာကို ၁၉၃၅ခုနှစ် မေလ (၂ဝ) ရက်နေ့မှာ ဥရုဂွေးနိုင်ငံရဲ့မြို့တော် မွန်တီ ဗီဒီယိုမြို့ (Montevideo) မှာ မွေးတယ်။ ဖခင်က လယ်သမား ၊ ဆင်းရဲလွန်းလို့ လူမွဲဘွဲ့ခံလိုက်ရတယ်။ မိခင်ကတော့ အီတလီနိုင်ငံကနေန နိုင်ငံရေးခိုလှုံသူ။ ဆင်းရဲလွန်းလို့ မူဇီကာရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ဘဝက အလုပ်ကြမ်းပေါင်းစုံလုပ်ပြီး ကုန်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ ၁၉၆ဝခုနှစ်တွေမှာ ကျူးဘားတော်လှန်ရေးရိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့် ဥရုဂွေးနိုင်ငံမှာ လက်နက်တိုင်တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်လာပြီး အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးပြုလုပ်လာချိန်မှာ ကျူးပါးမားကို့စ် (Tupamaros) အဖွဲ့ထဲကို ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ သူတို့အဖွဲ့က ငြိမ်းချမ်းမှုကို လိုချင်သူ ၊ နိုင်ငံကို အသစ်ပြန်လည်မွေးဖွားလိုသူ။ ၁၉၇ဝခုနှစ် နိုင်ငံရေးသမားဘဝမှာ သေနတ်ဒဏ်ရာ (၆) ခါရဖူးပြီး (၁၄) နှစ်ထောင်ကျခဲ့ဖူးတယ်။ ၁၉၉၄ ရွေးကောက်ပွဲမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အရွေးခံခဲ့ရတယ်။ ၁၉၉၉ ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ၂ဝဝ၅ခုနှစ် မတ်လ (၁) ရက်နေ့မှာ မူဇီကာဟာ မွေးမြူရေးနဲ့ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ၂ဝ၁ဝခုနှစ် မတ်လ (၁) ရက်နေ့မှာ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဒန်နီလို အက်စ်တိုရီ (Danilo Astori) ကိုကျော်ဖြတ်ပြီး ဥရုဂွေးနိုင်ငံရဲ့ အယောက်(၄ဝ) မြောက် သမ္မတဖြစ်လာခဲ့တယ်။
အမေရိကန်သမ္မတဆိုရင် အိမ်ဖြူတော်မှာနေတယ်၊ ပြင်သစ်သမ္မတဆိုရင် အဲလက်စ် နန်းတော် (Élysée Palace) မှာနေတယ်၊ အင်္ဂလန်ဘုရင်မကြီးဆိုရင်လည်း သူ့နန်းတော်မှာပဲနေတယ်။ မူဇာကီ သမ္မတဖြစ်တော့ နိုင်ငံတော်က စီစဉ်ပေးတဲ့အိမ်မှာ မနေဘူး။ ရပိုင်ခွင့်တွေကို မယူတဲ့သဘော။ မွန်တီ ဗီဒီယိုမြို့ရဲ့ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ လယ်တောအိမ်မှာပဲနေတယ်။ သူ့အတွက်နဲ့ နိုင်ငံတော်ကို စရိတ်မတက်စေချင်တဲ့သဘော။
အဝတ်အစားကိုလည်း ဖြစ်သလိုပဲ ဝတ်တယ်။ ကပိုကရိုနေတတ်တယ်။ သမ္မတလစာက ဒေါ်လာ ၁၂,ဝဝဝရတယ်။ သိန်း ၁၂ဝပဲဆိုပါစို့။ သူ့လစာထဲက (၉ဝ) ရာခိုင်နှုန်းကို ဆင်းရဲတဲ့ပြည်သူတွေကို လှူပစ်ခဲ့တယ်။ သူ့အိမ်မှာ လယ်ကွင်းကြီးရယ်။ ထွန်စက်အဟောင်းကြီးရယ်။ ခြေတစ်ဖက်ပြတ်နေတဲ့ မာနူလာ (Manuela) လို့ခေါ်တဲ့ ခွေးကြီးရယ်။ အိမ်ရဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာ သမ္မတကြီးလုံခြုံရေးကို စောင့်နေတဲ့ရဲသားနှစ်ယောက်ရယ်ပဲရှိပါတယ်။
Jose Mujica with Volkswagen Beetle
သမ္မတဖြစ်နေပေမယ့် ဇိမ်ခံကားကို မစီးပါဘူး။ သူ့အတွက်နဲ့ နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက် မကုန်စေချင်ဘူး။ ၁၉၈၇ခုနှစ်က ထုတ်တဲ့ ဒေါ်လာ ၁၈ဝဝ (သိန်း ၂ဝ) တန် Volkswagen Beetle လိပ်ခုံးကားကိုပဲ မြတ်မြတ်နိုးနိုး စီးနေတုန်းပါ။ ကျန်းမာရေးမကောင်းရင်လည်း အများပြည်သူတွေနဲ့ ဆေးခန်းမှာပဲ ကုတယ်။ သီးသန့်မကုဘူး။ သူ့အတွက်နဲ့ နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်မထိခိုက်စေချင်ဘူး။ ၂ဝ၁ဝခုနှစ် မတ်လ ၁ရက်မှာ သမ္မတဖြစ်တယ်၊ ၂ဝ၁၅ခုနှစ် မတ်လ ၁ရက်မှာ သမ္မတရာထူးက ဆင်းသွားတယ်။ သူ့ရာထူးမှာ တစ်ရက်ပိုမနေဘူး။ အချိန်တန်ရင် ဆင်းသွားတယ်။ လယ်တောထဲက လာတဲ့လူက လယ်တောထဲမှာပဲ ပြန်ဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်တော့်ကို အဆင်းရဲဆုံး သမ္မတလို့ ပြောကြတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆင်းရဲတယ်လို့ မခံစားမိပါဘူး။
တကယ်တမ်းဆင်းရဲတဲ့သူဆိုတာ ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားတဲ့ လူနေမှုဘဝကို
ကာမိဖို့ ပိုက်ဆံတွေကို မရပ်မနားရှာဖွေနေရတဲ့သူတွေပါ”
ကဲ . . . လူ့ဘဝတိုတိုလေးထဲမှာ နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်၊ တန်ဖိုးကြီးတံဆိပ်တွေနောက်ကို လိုက်ပြီးတော့ ရူးသွပ်နေတော့မှာလား။ အကျိုးရှိတာတွေကို လုပ်နေပြီး ကုန်ဆုံးတော့မှာလား။ ကိုယ်တိုင်ပဲ ဆုံးဖြတ်ကြရအောင်ဗျာ။ အဓိကအချက်က အရေးမကြီးတာတွေ လုပ်နေရင် အရေးကြီးတာတွေ မေ့တတ်တယ်ဆိုတဲ့ ဒဿနကို အမြဲသတိရသင့်ပါတယ်။ လူ့ဘဝတိုတိုလေးမှာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေကြရအောင်နော်။
ကမ်ဘာ့အဆငျးရဲဆုံးသမ်မတကွီး ဟိုဆေး မူဇီကာ (José Mujica)
ဥရုဂှေးဆိုတဲ့ နိုငျငံလေး။ ကမ်ဘာ့ဖလားပှဲတှမှော ဥရုဂှေးလကျရှေးစငျအသငျးကို ကွားရတတျတယျ။ တောငျအမရေိကတိုကျက နိုငျငံလေး သိပျတော့စိတျဝငျးစားစရာ မဟုတျ။ စိတျဝငျးစားစရာ ကောငျးတာက ဥရုဂှေးနိုငျငံကို ပဲ့ကိုငျသှားတဲ့ သမ်မတဟောငျးကွီး ဟိုဆေး မူဇီကာ (José Mujica)။ ရိုးသားလှနျးတဲ့ သမ်မတကွီး။ ကမ်ဘာကြျောသတငျးဌာနဘီဘီစီကတောငျ ‘The World’s ‘Poorest’ President’ ကမ်ဘာ့အဆငျးရဲဆုံးသမ်မတလို့တောငျ တငျစားခဲ့တယျ။ မူဇီကာ ဘာတှလေုပျခဲ့လို့ ဆငျးရဲတာလဲ။
ဟိုဆေး မူဇီကာကို ၁၉၃၅ခုနှဈ မလေ (၂ဝ) ရကျနမှေ့ာ ဥရုဂှေးနိုငျငံရဲ့မွို့တျော မှနျတီ ဗီဒီယိုမွို့ (Montevideo) မှာ မှေးတယျ။ ဖခငျက လယျသမား ၊ ဆငျးရဲလှနျးလို့ လူမှဲဘှဲ့ခံလိုကျရတယျ။ မိခငျကတော့ အီတလီနိုငျငံကနနေ နိုငျငံရေးခိုလှုံသူ။ ဆငျးရဲလှနျးလို့ မူဇီကာရဲ့ဆယျကြျောသကျဘဝက အလုပျကွမျးပေါငျးစုံလုပျပွီး ကုနျဆုံးခဲ့ရတယျ။ ၁၉၆ဝခုနှဈတှမှော ကြူးဘားတျောလှနျရေးရိုကျခတျမှုတှကွေောငျ့ ဥရုဂှေးနိုငျငံမှာ လကျနကျတိုငျတပျဖှဲ့တှပေျေါလာပွီး အစိုးရဆနျ့ကငျြရေးပွုလုပျလာခြိနျမှာ ကြူးပါးမားကို့ဈ (Tupamaros) အဖှဲ့ထဲကို ဝငျရောကျခဲ့တယျ။ သူတို့အဖှဲ့က ငွိမျးခမျြးမှုကို လိုခငျြသူ ၊ နိုငျငံကို အသဈပွနျလညျမှေးဖှားလိုသူ။ ၁၉၇ဝခုနှဈ နိုငျငံရေးသမားဘဝမှာ သနေတျဒဏျရာ (၆) ခါရဖူးပွီး (၁၄) နှဈထောငျကခြဲ့ဖူးတယျ။ ၁၉၉၄ ရှေးကောကျပှဲမှာ လှတျတျောကိုယျစားလှယျအဖွဈ အရှေးခံခဲ့ရတယျ။ ၁၉၉၉ ရှေးကောကျပှဲမှာတော့ အထကျလှတျတျောအမတျဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ ၂ဝဝ၅ခုနှဈ မတျလ (၁) ရကျနမှေ့ာ မူဇီကာဟာ မှေးမွူရေးနဲ့ရလေုပျငနျးဝနျကွီးဖွဈလာခဲ့တယျ။ ၂ဝ၁ဝခုနှဈ မတျလ (၁) ရကျနမှေ့ာ ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီး ဒနျနီလို အကျဈတိုရီ (Danilo Astori) ကိုကြျောဖွတျပွီး ဥရုဂှေးနိုငျငံရဲ့ အယောကျ(၄ဝ) မွောကျ သမ်မတဖွဈလာခဲ့တယျ။
အမရေိကနျသမ်မတဆိုရငျ အိမျဖွူတျောမှာနတေယျ၊ ပွငျသဈသမ်မတဆိုရငျ အဲလကျဈ နနျးတျော (Élysée Palace) မှာနတေယျ၊ အင်ျဂလနျဘုရငျမကွီးဆိုရငျလညျး သူ့နနျးတျောမှာပဲနတေယျ။ မူဇာကီ သမ်မတဖွဈတော့ နိုငျငံတျောက စီစဉျပေးတဲ့အိမျမှာ မနဘေူး။ ရပိုငျခှငျ့တှကေို မယူတဲ့သဘော။ မှနျတီ ဗီဒီယိုမွို့ရဲ့ဆငျခွဖေုံးရပျကှကျမှာရှိတဲ့ လယျတောအိမျမှာပဲနတေယျ။ သူ့အတှကျနဲ့ နိုငျငံတျောကို စရိတျမတကျစခေငျြတဲ့သဘော။
အဝတျအစားကိုလညျး ဖွဈသလိုပဲ ဝတျတယျ။ ကပိုကရိုနတေတျတယျ။ သမ်မတလစာက ဒျေါလာ ၁၂,ဝဝဝရတယျ။ သိနျး ၁၂ဝပဲဆိုပါစို့။ သူ့လစာထဲက (၉ဝ) ရာခိုငျနှုနျးကို ဆငျးရဲတဲ့ပွညျသူတှကေို လှူပဈခဲ့တယျ။ သူ့အိမျမှာ လယျကှငျးကွီးရယျ။ ထှနျစကျအဟောငျးကွီးရယျ။ ခွတေဈဖကျပွတျနတေဲ့ မာနူလာ (Manuela) လို့ချေါတဲ့ ခှေးကွီးရယျ။ အိမျရဲ့မလှမျးမကမျးမှာ သမ်မတကွီးလုံခွုံရေးကို စောငျ့နတေဲ့ရဲသားနှဈယောကျရယျပဲရှိပါတယျ။
သမ်မတဖွဈနပေမေယျ့ ဇိမျခံကားကို မစီးပါဘူး။ သူ့အတှကျနဲ့ နိုငျငံတျောဘတျဂကျြ မကုနျစခေငျြဘူး။ ၁၉၈၇ခုနှဈက ထုတျတဲ့ ဒျေါလာ ၁၈ဝဝ (သိနျး ၂ဝ) တနျ Volkswagen Beetle လိပျခုံးကားကိုပဲ မွတျမွတျနိုးနိုး စီးနတေုနျးပါ။ ကနျြးမာရေးမကောငျးရငျလညျး အမြားပွညျသူတှနေဲ့ ဆေးခနျးမှာပဲ ကုတယျ။ သီးသနျ့မကုဘူး။ သူ့အတှကျနဲ့ နိုငျငံတျောဘတျဂကျြမထိခိုကျစခေငျြဘူး။ ၂ဝ၁ဝခုနှဈ မတျလ ၁ရကျမှာ သမ်မတဖွဈတယျ၊ ၂ဝ၁၅ခုနှဈ မတျလ ၁ရကျမှာ သမ်မတရာထူးက ဆငျးသှားတယျ။ သူ့ရာထူးမှာ တဈရကျပိုမနဘေူး။ အခြိနျတနျရငျ ဆငျးသှားတယျ။ လယျတောထဲက လာတဲ့လူက လယျတောထဲမှာပဲ ပွနျဆငျးသှားခဲ့ပါတယျ။
“ကြှနျတေျာ့ကို အဆငျးရဲဆုံး သမ်မတလို့ ပွောကွတယျ။
ကိုယျ့ကိုယျကို ဆငျးရဲတယျလို့ မခံစားမိပါဘူး။
တကယျတမျးဆငျးရဲတဲ့သူဆိုတာ ကုနျကစြရိတျမွငျ့မားတဲ့ လူနမှေုဘဝကို
ကာမိဖို့ ပိုကျဆံတှကေို မရပျမနားရှာဖှနေရေတဲ့သူတှပေါ”
ကဲ . . . လူ့ဘဝတိုတိုလေးထဲမှာ နောကျဆုံးပျေါဖကျရှငျ၊ တနျဖိုးကွီးတံဆိပျတှနေောကျကို လိုကျပွီးတော့ ရူးသှပျနတေော့မှာလား။ အကြိုးရှိတာတှကေို လုပျနပွေီး ကုနျဆုံးတော့မှာလား။ ကိုယျတိုငျပဲ ဆုံးဖွတျကွရအောငျဗြာ။ အဓိကအခကျြက အရေးမကွီးတာတှေ လုပျနရေငျ အရေးကွီးတာတှေ မတေ့တျတယျဆိုတဲ့ ဒဿနကို အမွဲသတိရသငျ့ပါတယျ။ လူ့ဘဝတိုတိုလေးမှာ ရိုးရိုးရှငျးရှငျးနကွေရအောငျနျော။